ဦးကုလားဟုခေါ်ပါသည်။: March 2009
နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အရေးပေါ်အကူအညီ ကုလသမဂ္ဂ တောင်းခံ
၃၁ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ နိုင်ငံ တကာရဲ့ အကူအညီကို သိသိသာသာ လိုအပ်နေတုန်းပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံပေးမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်လို အလားတူ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေက အတွေ့အကြုံတွေအရ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု ကူညီထောက်ပံ့ရေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဘစ်ရှိုး ပါရာဂျူလီ (Bishow Parajuli) က ပြောပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းဒဏ်အတွက် ပေးနေတဲ့ အကူအညီတွေ အခုမှ စတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့က ချမှတ်ထားတဲ့ အခြေခံ သဘောတူညီချက်နဲ့အညီ နာဂစ်မုန်တိုင်းလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း ၃ နှစ် စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ ရေတို၊ ရေရှည် အကူအညီတွေ အရေးပေါ် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ လောက် လိုအပ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ နောက်တလလောက်အတွင်းမှာ မိုးရာသီ ကျရောက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသူတွေ အတွက် နေထိုင်စရာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အရေးပေါ်အကူအညီ ရန်ပုံငွေ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နာဂစ် မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရရှိဖို့ အလှူရှင်များ ညီလာခံတခု အခုပတ်တွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပ ဖို့ ကုလသမဂ္ဂက စီစဉ်နေပါတယ်။
၂၇ မတ် ၂၀၀၉။ NEJ
ရန်ကုန်အေအက်ဖ်ပီသတင်းကမူ (၁) ဦးသေပြီး (၂) ဦးဒဏ်ရာရသည်ဟု ရေးထားသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဗုံးကို ဖောက်ခွဲရန်ကြံစည်နေစဉ် ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံအာဏာပိုင်တဦးက ပြောသည်။နေပြည်တော်တွင် စစ်အစိုးရအခေါ် တပ်မတော်နေ့မကျင်းပမီ တရက်အလို ရန်ကုန်၌ ယခုကဲ့သို့ ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ကို စစ်အစိုးရဘက်က မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပေ။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ သြဇာရှိ နိုင်ငံရေးသမား လီချန်ချွန်း မြန်မာနိုင်ငံရောက်သည့်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အတော်မျက်နှာပူစရာဖြစ်မည်ဟု ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသမားတဦးက သုံးသပ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကုလကြေညာချက် အမေရိကန် ထောက်ခံ
၂၅ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း။
တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးမှုတွေကို ကြားနာတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်တာကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်တစောင် ထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေကို လိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်စိတ်ပျက်မိတယ်လို့လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုပြုံးချိုနဲ့အခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာဟာ တရားဥပဒေနဲ့မညီဘူး၊ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလို ဖမ်းဆီးထားတာကို မှန်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုမှသက်သေမပြနိုင်တဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့က သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားတာကိုအမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်မှာ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်တာ ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မက်ဂန် မတ်ဆန် (Meggan Mattson) က ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အတွက်နဲ့ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ တောင်းဆိုချက်တွေကို စစ်အစိုးရက မသိကျိုးကျွံပြုနေတာကို စိတ်ပျက်မိတဲ့အကြောင်း” အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မက်ဂန် မတ်ဆန်က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ၏ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦးကွယ်လွန်
၂၂ မတ် ၂၀၀၉။
ကိုဇာဂနာ(ခ) ကိုသူရ၏မိခင် သည်းခြေပြွန်လမ်းကြောင်းတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွား၍ ဝေဒနာခံစားနေရသူ အသက် ၈၃ နှစ်အရွယ် စာရေးဆရာမကြီးသည် သောကြာနေ့ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။သူမ အသည်းအသန် နာမကျန်း ဖြစ်နေသော်လည်း မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်ရှိ သားဖြစ်သူ စိတ်မကောင်းမှာစိုး၍ အသိမပေးဘဲ ထားစေခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှပေးပို့သော ပန်းခြင်းကို လူမှုဝန်ထမ်းကြီး ကိုကျော်သူမှကိုင်ဆောင်လာပုံ
မြန်မာ့အသံနှင့် မြ၀တီ ရုပ်သံတို့မှတင်ဆက်ပြသမည့် မျောက်ပွဲ
စားသောက်ဆိုင်တခု မှာ မူးပြီး ကာရာအိုကေ ဆို လိုက်က လိုက်လုပ်နေတဲ့ကျော်ဆန်းပုံကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။မြှောက်ပေးရင် ဟိုဒင်း တက်အောင် ကတယ်ဆိုတာ ကျော်ဆန်းလို လူမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။ဒီကောင် ဟာ ငယ်ငယ်က ခပ်ပေါပေါ ခပ်ရူးရူး လို့ သိရတယ်။ သူတို့ ရွာ က အိုးစည်ဝိုင်းမှာ လိုက်က ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကတာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အနောက်တိုင်းအက ကို မျောက်တကောင်လို ကနေပြီး သူများတွေကို မက နိင်အောင်ပိတ်ထားတာ မိုက်ရိုင်းတယ်လေ။
လှည့်မကြည့်နဲ့ ဆွဲစိမယ်လေး.... သားလေးကျော်ဆန်းရေ ဘုရားဖူးတွေလာတုန်း နောက်ဂျွန်းလေး လုပ်လိုက်ဟ....
၁၉ မတ် ၂၀၀၉။
ညက တုန်းက လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့ဆိုပေမဲ့ လမင်း က အရမ်း ကို သာနေတယ်၊ လကြီးက ပိုပြီးဝိုင်းစက်လာ သလိုပဲ လေတချက်မွှေ့ လိုက်တိုင်း ဆောက်တည်ရာမဲ့တိမ်တိုက်တွေက …ပရမ်းပတာတွေဖြစ်ကုန်ရော.. ငွေနားကွပ် တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေက နေ့ဖက်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီလေ၊ အခုတိမ်တွေမှာ ငွေနားကွပ်မရှိတော့.. အကွပ်မဲ့ကြမ်း ပရမ်းပတာဆိုပေမဲ့ မိုးကောင်းကင်ကို ဟီးလေးခိုပြီး မာန်ဝင့်နေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေ ၊လောကကြီးကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့ တိမ်တိုက်ပျံတွေ လေတစ်ချက်မွေ့တိုင်း ထားရာနေ စေရာသွားနေရတဲ့ ဗေဒါတပွင့်လောက်တောင်မှ တန်ဖိုးမရှိတော့။ လောကစကားနဲ့ဆိ်ုရင်တော့ အပေါ်ထပ်အဆောက်အဦးက အနှစ်မဲ့ဘ၀တွေလို့ဆိုရမလား…“သား မင်းသူတို့ကိုအားကျနေလား”ကောင်းကင်ကို ဟီးလေးခိုပြီးတော့ နေကြတဲ့ တိမ်တိုက်တွေကို ကြည်ပြီးတော့ နေတဲ့ မြစ်ပင်ပုစုကွေးလေးကို မြက်ပင်အဖေက မေးတော့….ဟုတ်ကဲ့ .. သားသူတို့ လိုဖြစ်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ မြက်ပင်ပုစုကွေးလေးရဲ့စကားကို မြက်ပင်အဖေက ကြားတဲ့အခါ…
“သားရေ.. အားမကျစမ်းပါနဲ့ မိုးကောင်းကင်မှာ နေရလို့ လွပ်လပ်တယ်မင်းထင်နေရင်တော့ မှားပြီ၊ သူတို့ခမျာ နေထွက်ပြီးအရမ်းပူ လာရင် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ တဲတိုးပြီးနေတဲ့ လူတွေ လို ပဲ စစ် ဆေးရေးတွေရောက် လာရင် ဖယ်ပေး၊ ဖျက်ပေးရတယ်၊ နောက်ပြီး လေတိုက် လာတဲ့ အခါ စည်ပင်အခွန်မပေးနိုင်လို့လျှောက်ပြီးပြေးနေရတဲ့ လမ်းလျှောက်ဈေးသည်လို နေရာ တကျ မနေနိုင်ဖြစ်ရတယ်၊ ပြီးတော့ ကောင်း ကင်ရဲ့ ဘုရင်လို့ ပြောနေတဲ့ နေမင်းကြီးရဲ့အလို အရ နေ့တိုင်း မှာ အချိန်တိုင်းမှာ အရောင်တွေပြောင်းပြီး နေကြရတာ ပါကွာ သူများနှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူနေကြတာ လေ။ ဘာလဲဟိုတခါက တိမ်တိုက်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ထား လို့စိတ်မကောင်း ဖြစ် နေလား ပြီးတော့ မြေကြီးပေါ်က နင်းပြား လို့ အခေါ်ခံရတာ ကို သားဝမ်းနည်းနေလား”“ဟုတ်တယ်အဖေ..ဒီတုံးက သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ အကျီက ငွေရောင်လေးတွေနဲ့သိပ်လှတယ်..အဖေရ”“ အား..ငါ့သားအတု ခိုး မှာနေပြီ..ဒါက ခဏလေး အရောင်တင်ထားတာ.. အခုသားရှေ့ မှာ ရှိတဲ့ ကတ္တရာလမ်း လိုပဲ လူကြီးတွေ လာမှာ မို့ ခဏလေးကောင်းနေတာ ၊ လူကြီးတွေ လည်း ပြန်ရော လမ်းလည်း ပျက်ရော..ဒါသား လည်း တွေ့နေတာ ပဲ၊ အခု လည်း ကောင်း ကင် က ဘုရင် နေမင်း လာ လို့ ခဏငှါး ၀တ်တာ လေ နေမင်းကြီး ပြန်ရင် လူ လုပ်ထားတဲ့ လမ်း ထက် တောင် ငွေရောင် တွေ က ပျက် မြန်သေးဟ။ပြီးတော့ သားရေ.. သူတို့ဘ၀ က သနားစရာပါ ကွာ သူတို့ပုံတွေကြည့် ပါလား တော် ကြာ ဘီလူး ပုံ ဖြစ် လိုက် တော်ကြာ မင်းသား ဖြစ်လိုက် တော် ကြာဂွမ်းပုံဖြစ်လိုက် ဇတ်မင်းသမီးတွေ လို အရောင် တွေပြောင်း လိုက်..မော လိုက်တာကွာ၊ အခု အဖေတို့ က မြက်.. လမ်းဘေးကမြက် မွေး လာတုံးကစိမ်းနေတယ် အခု အရွယ်ရောက် လာတော့် လည်း စိမ်းနေတယ်…သေခါနီး သက် ကြီး မြက် ဖြစ် နေတာ တောင်မှ စိမ်းနေတုံး ပါ ကွာ၊ ဟို နား လမ်းထောင့် အိမ်က ကိုကြွယ် လိုစီး ပွားရေး သမားမျိုး အလုပ်ကွက်ရအောင် ဘယ်သူ့ဆီ ဘယ် လောက် ပေးရ၊ ဘာ အတွက် ဘယ် လောက်လှူရ မရှိဘူး ကွာ၊ အစိမ်းရောင် ဖြစ် ခွင့်ရ ဖို့ ဘယ် သူ့ ကို မှ ဟန် လုပ် ဖားနေစရာ မလို ဘူး ကွာ..နဂို ကတည်း ကအစိမ်းရောင်ပဲလေ… အခု လည်း စိမ်း မယ် နောင် လည်း စိမ်း မယ်ပေါ့ကွာ။။ ဟုတ်ပီ လား..အမ်.. ဒီက အဖေပြောနေတာတော့ နား မထောင်ဘူး.. လူတွေ ရပ်ပြောနေတဲ့ စကား ကို နားထောင် နေတယ်…သားမြက်ပင်ပြောတဲ့စကား ကို ပျင်းနေလား…မဟုတ် ဘူး အဖေရ … လူတွေပြောနေတာ က နားထောင် ကောင်း နေလို့ ပါ..ဟို မှာကြည့်လေ အဖေ.. ကျနော် တို့ အရှေ့ အိမ်ကကျောင်း အမ ကြီးပြောနေတာ ဘယ်လောက်လှူပြီး ပြီ နောက် ဘာ လှူရမလဲ..ဆိုပြီးတော့.. အားကျလို့ ပါ.. အဖေရာ…။အပြစ် မပြောချင် ဘူး သားရေ မင်း ငယ်သေးတာ ကိုး.. တခါတုံး ကသားပြောတဲ့ ကျောင်း အမကြီးက နာမည်ကျော်ဆရာတော် ကြီးတပါး ထိုင်တဲ့ကျောင်း မှာ မုခ်ဝ မလှူရ လို့ ပြန် ခဲ့တာဗျ ၊နာ မည်မပါရင် မလှူ ဘူး သားရေ…ပြီးတောု သား မတွေ့ ဘူး လားစားစရာမရှိ၊ သောက်စရာ မရှိတဲ့ ကလေးတွေ လာရင် ခွေးနဲ့ တိုက် လွတ် တာ၊ တခါတုံး ကဆိုကောင် လေး တစ် ယောက် အကြောက် လွန်ပြီး ပြေးရင်း ငါ့ ပေါ်တောင် ရှူရှူးတွေ ပန်း ခဲ့သေး..ငါတို့ မြက် လေကွာ..သားရေ။နေဦးသား အဖေမေးဦးမယ်..လူတွေက ပါးစပ်နဲ့ပြောနေတာ က တကယ်ကွာ ဘာမှမရှိရင် နေ အကျင့်တရားနဲ့ စိတ်ဓာတ် ကောင်းရင်ရပီဆိုတာ ဒါပေမဲ ဒီကိုယ်ကျင့်တရားတို့ ရိုးသားမှုတို့၊ သစ္စာရှိမှုတို့ နဲ့တင် တောင်လို့ ညားသွားတဲ့ သတိုးသမီးသတိုး သားရှိ လား.. မရှိ ဘူးနော်..ငွေနဲ့ ပစ်ဝယ်ပြီး လက် ဖွဲ့ ပစ္စည်း အဝေ မတည့် တာနဲ့ ညမအိပ်ပဲ ကွဲကြတာ ပဲ မြင် ဘူး ပါတယ်သားရေ။ဒီတော့ လူ တွေ ကိုယ် ကျင့်တရားဖေါက်သလို .. ငါ့သား လည်း အပင် ကျင့်တရား မဖေါက်နဲ့ ငါတို့ အပင် တွေက ကာဗွန်တိုင် အောက်ဆိုဒ်ကိုရှူပြီးတော့ လူတွေ အတွက် အောက်စီဂျင် ကိုပြန် ထုတ် ပေးမယ်၊ ပြီးတော့ လူတွေခြေနဲ့နင်း လည်းကြီးပြင်းပေးရမယ်၊ ရေမလောင်းလည်း ရှင်သန် ပေးရမယ်၊ လူတွေ ဘာလုပ်လုပ် .. ငါတို့က အမြဲတမ်း ကြီး ထွားပြီး အစိမ်းရောင်ရှိနေအောင် လုပ် ဖို့ပဲစဉ်းစား ပါ ကွာ…။ဟော..ပြောရင်းဆိုရင်း..လေတွေတိုက် လာပီ… မင်း အထင်ကြီးတဲ့ တိမ်တိုက် တွေ အမဲရောင် ပြောင်းပြီး ငိုရတော့ မယ်…။လာသား အဖေတို့ လက် တွေ မြဲမြဲထား ပြီးတော့ အဖေတို့အရိပ် ကို ခို ဖို့ လာတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေကို လုံအောင် လွင့်မသွားအောင် ကာပေးထား… အပင် ကျင့်တရား နဲ့ ညီအောင် နေကြစို့သားရေ… မိုးရွာ လာပြီ…။ ။
စာရေးသူ ၊ Upasaka ၊
ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ ပြန်လည် လက်ခံမည်
၁၈ မတ် ၂၀၀၉။
အင်ဒိုနီးရှားသို့ လှေများဖြင့် ခိုးဝင် လာသည့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများကို ပြန်လည် လွှဲပြောင်း လက်ခံရန် မြန်မာ စစ်အစိုးရက သဘောတူ လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ခိုးဝင် လာသူများသည် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ဇန်န၀ါရီလ ကတည်းက ရောက်ရှိ နေခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြနိုင်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရက ငြင်းဆန် နေခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒီနို ပက်တီဂျာလား က ထိုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် သိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဖက်မှ ရိုဟင်ဂျာ တို့အား ပြန်လည် လက်ခံရန် မီးစိမ်းပြ လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီနိုက ရိုဟင်ဂျာ တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာသည့် အထောက်အထားများ ပြသခဲ့ ပြီးနောက် မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် ၎င်းတို့အား ပြန်လည် လက်ခံရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သတင်းထောက် များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာများကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အာချေး ခရိုင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၁၈ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
အရင်လထဲမှာ စစ်အစိုးရက အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ အကျဉ်းသား ၆,၃၁၃ ယောက် လွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူ ၂၉ ယောက် ပါဝင်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးမှူးက ကြိုဆိုပေမဲ့လို့ ဒီလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်သေးဘူးလို့လည်း ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းနှင့်ချီ၍ ဖမ်းဆီးရမိ
၁၆ မတ် ၂၀၀၉။ လူထုအသံ
Methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြား (၂) သန်း ကို မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း အစိုးရပိုင် သတင်းဌာနများ က မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့က ကြေငြာ လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အနီး ထရပ်ကားတစ်စင်း ၏ ဆီတိုင်ကီ အတွင်း ဖွက်ထားသည့် ဆေးပြားများ ကို ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ခြင်းဟု အာဏာပိုင်များ ကဆိုသည်။ ထိုဆေးဝါးများ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက ဖမ်းဆီးမိခြင်းဖြစ်ပြီး တာချီလိတ်မြို့ အတွင်း (၁၀) ဘီးကားတစ်စင်း အတွင်းမှ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ကားပိုင်ရှင်ကို လည်း ထိန်းသိမ်း ထားလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
မကြာသေးမီကမှ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထုတ်ပြန်သော စစ်တမ်းအတွင်း တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှု အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယခုဖမ်းဆီးရမိမှုသည် ပိုမိုတိကျသော အထောက်အထားတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပမာဏများပြားသော စိတ်ကြွဆေးများ ဖမ်းဆီးရမိမှုသည် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်း တစထက်တစ တိုးမြင့်လာနေသည်။
မြန်မာ စစ် အစိုးရကမူ ၎င်းတို့အနေနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်းများကို အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားထားပြီး ယမန်နှစ်အတွင်း ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်များ မှ ဘိန်းစိုက်ခင်း(၇၈၉၃) ဧကကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေငြာ ထားသည်။
နော်ဝေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြန်မာကြောင့် ရပ်ဆိုင်း
၁၄ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
တရုတ်နိုင်ငံ ဒန်ဖွန်း မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးက စစ်တပ်အုပ်စိုးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တပ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရောင်းချတဲ့အတွက် နော်ဝေနိုင်ငံက အဲဒီ တရုတ်မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီမှာ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကို ရပ်လိုက်ပါပြီ။ နော်ဝေ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့က ရတဲ့ငွေများကို အဲဒီတရုတ် ဒန်ဖွန်း မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားတာဖြစ်ပြီး စစ်ဖက်သုံး မော်တော်ယာဉ်များ ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အထောက်အကူပြုနေတဲ့ ကုမ္ပဏီကို နော်ဝေနိုင်ငံက ငွေကြေးမပတ်သက်နိုင်ဘူးလို့ နော်ဝေအစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ခရစ်စတန် ဟာဗွန်ဆင်းန် က သောကြာနေ့မှာ ကြေညာပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံအနေနဲ့ ရေနံနဲ့ဓါငွေ့ကရတဲ့ အစိုးရပင်စင် ကမ္ဘာ့ရန်ပုံငွေ လို့ တရားဝင် အမည်ပေးထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ နိုင်ငံခြား စတော့များ၊ ငွေချေးစာအုပ်များ ၀ယ်ယူမြှုပ်နှံနေတာဖြစ်ပြီး တနေ့နေ့တချိန်ချိန် နော်ဝေနိုင်ငံမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ ခန်းခြောက်သွားရင် သုံးစွဲမယ့် အရံ ငွေပင်ငွေရင်းများဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါ အဲဒီရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ တန်ဘိုးရှိပြီး နော်ဝေနိုင်ငံကလည်း လောလောဆယ် ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များကို တင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲရက် ရန်ကုန်မှာ စစ်ကားတွေကင်းလှည့်
၁၃ မတ် ၂၀၀၉။ NEJ
ရန်ကုန်မှာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲရက်အတွင်း မီးမလာသော်လည်း သံချပ်ကာအပြည့်နှင့် ရဲအပြည့်တင်ထားသော စစ်ကားကြီးများ ရန်ကုန်မြို့တွင် လှည့်နေကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောသည်။“ဒီမနက်ကပဲ အနော်ရထာလမ်းမှာ ရဲတွေအပြည့်၊ လက်နက်အပြည့်နဲ့ လည်မှာ အနီတွေ စည်းပြီးတော့၊ ကားကြီး (၇) စီးလောက် လှည့်နေတာတွေ့တယ်” ဟု မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ မနက်မြင်ကွင်းကို ရန်ကုန်နေသူတဦးက ပြောသည်။နဂိုပေးနေကျ မြို့ပေါ်တွင် A, B, C, H နှင့် မြို့ပြင် က, ခ, H ဟူ၍ အပိုင်းလိုက် မီးပေးမှု စနစ်ကို ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ရှိနေသော်လည်း မီးပေးချိန် တိုးမြှင့်ပေးမည့် အစီအစဉ် လုံးဝမရှိကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ပေးဝေရေးအဖွဲ့က အမည်မဖော်လိုသူတဦးက ပြောသည်။
“ကျမတို့ အင်းဝလမ်းမှာ ဒီနေ့ည (၁၁) နာရီမှာ မီးလာမယ်၊ ပြီးရင် မနက် (၅) နာရီမှာ ပျက်မယ်၊ ဒါက ပုံမှန်လာ နေကျ၊ ဒါပေမယ့် လာချိန်မှာ မီးမပျက်မှာကိုတော့ အာမခံလို့ မရဘူး၊ အချိန်သတ်မှတ်ထားပေမယ့် လာရင်းနဲ့ ပျက်သွားတာမျိုးက ဖြစ်နေကျ ပြဿနာဖြစ်နေပြီ” ဟု တောင်ဥက္ကလာသူတဦးက မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့ ညနေက ပြောသည်။“ကလေးတွေ စာမေးပွဲရှိတဲ့အတွက် လင်းအားကောင်းမယ့် ဖယောင်းတိုင်အကြီးတထုပ်ကို (၆၅၀) ကျပ်တန် ၀ယ်ထားတယ်၊ စာကျက်နေရင်း အိပ်ငိုက်သွားမှာစိုးလို့ ထိုင်စောင့်ပေးရတာပေါ့၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့” ဟု သင်္ကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း ကျောင်သားမိဘတဦးကဆိုသည်။ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် တက္ကစီယာဉ်မောင်းတဦးက “ခုနကတော့ မီးလာတာတွေ့တယ်၊ ပြောလို့မရဘူးဗျ၊ ပျက်ချင်ပျက်နေတာ” ဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်တွင် လက်ရှိ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် မီးပေးချိန် ပိုမိုမရခြင်း၊ ပေးသည့်အချိန်အတိုင်း မီးမမှန်ခြင်းမှာ မတ်လ (၆) ရက်နေ့ညက မော်လမြိုင်တွင် EPC ရုံးအား ၀ိုင်း၍ခဲများဖြင့် ၀ိုင်းပေါက်သည့် ပြဿနာကို ဂရုတစိုက် မရှိသည့်အား ပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းအယ်ဒီတာ တဦးကသုံးသပ်သည်။“မော်လမြိုင်မှာလို ရန်ကုန်က ကျောင်းသားတွေ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲတာမျိုး ဖြစ်လာရင်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ယင်းက ဆိုသည်။ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲအရာရှိတဦးက “ကျောင်းသားတွေကို သွေးထိုးပေးမယ့်သူတွေရှိမှ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာပါ၊ အခုလည်း လုံခြုံရေးတွေ လှည့်နေတာပဲ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည့် ရှားပါး ငါး မျိုးစိတ်သစ်
၁၃ မတ် ၂၀၀၉။
သွေးစုပ် ဖုတ်ကောင်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော သွားစွယ်များ ရှိသည့် ငါးတမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း တွေ့ရှိ ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခင်က မှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း မရှိသေးသည့် အဆိုပါ ငါးမျိုးနွယ်သည် သေးငယ် သော်လည်း အလွန် အရုပ်ဆိုးသည့် ပုံပန်း သဏ္ဍာန်မျိုး ရှိနေကြောင်း ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ ကြသည်။
Danionella dracula အမည်ရှိ အဆိုပါ ငါးငယ်သည် အရွယ်အားဖြင့် (၁၈)မီလီ မီတာမျှသာ ရှည်လျားပြီး ငါးမျိုးနွယ် (၃၇၀၀)ခန့် ပါဝင်သည့် Cypriniform အုပ်စုတခုနှင့် ဆင်တူနေသော်လည်း မှတ်တမ်း မတင်ရသေးသည့် ငါးမျိုးစိတ် တခုသာဖြစ်ကြောင်း လန်ဒန်သဘာဝ သမိုင်းပြတိုက်မှ ဒေါက်တာ ရက်ဖ်ဘရစ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငါးငယ်၏ မေးရိုးများမှ သိသာထင်ရှားစွာ ထွက်နေသည့် အစွယ်ချွန်မျိုး ပါရှိသော ငါးများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်မှာ နှစ်သန်းပေါင်း (၅၀၀)ကျော်မျှ ရှိနေပြီဟု ယုံကြည်ထားသော်လည်း ယခု ငါးကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုသည် အံ့ဩစရာ အခြေအနေတရပ်ဖြစ်ကြောင်း ရစ်ဖ်က ၀န်ခံခဲ့သည်။
၎င်းတို့ အနေနှင့် အဆိုပါငါးကို မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ စမ်းချောင်းတခုထဲတွင် လွန်ခဲ့သော (၂)နှစ် ကတည်းက တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း မျိုးစိတ်သစ် ဟုတ်မဟုတ် စီစစ်နေသဖြင့် ကြာမြင့် ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ဝန်ခံကာ ယခုမှ အတည်ပြု ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လိုက်ကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
၁၃ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို ICC တင်ဖို့ အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သြစတြေးလျ အစိုးရအနေနဲ့ စဉ်းစားတာမျိုးရှိသလားလို့ လွှတ်တော်အတွင်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သူကတော့ သြစတြေးလျ Green ပါတီရဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ စကော့တ်လော်ဒ်လမ်မ် (Scott Ludlam) ပါ။
မစ္စတာ စကော့တ် လော်ဒ်လမ်မ်။(ဓာတ်ပုံ-Green ပါတီ အင်တာနက်စာမျက်နှာ)“သြစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ICCမှာတင်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ အကြံပြုချက် တွေကို စဉ်းစားတာမျိုး ရှိ-မရှိ ကျနော် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သြစတြေးလျအစိုးရ အနေနဲ့ ဒီလိုစစ်ဆေးဖို့ ပယ်ချထားတာမျိုး မရှိကြောင်း၊ ဒါဟာ အနာဂတ်မှာ အသုံးဝင်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့၊ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။”
Gmail Password ခိုးရအောင်(Golden Eye)
GoldenEyeSpywareသင်တန်းမှာသင်ပေးတာကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမယ့်ဘလော့မှတော့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မရေးခဲ့တာများပါတယ်။ဒီSoftwareအကြောင်းသင်ခဲ့တုန်းကအရမ်းစိတ်ဝင်းစားတဲ့လူများတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဒီ Software က Password ခိုးပေးတဲ့ Program ပါ။ဘယ်လိုခိုးပေးလဲဆိုတော့ ဒီSoftware တင်ထားတဲ့စက်ဆိုရင်သွားမသုံးလိုက်နဲ.သုံးလိုက်တာနဲ.သုံးလိုက်သူရဲ. Password၊သုံးနေတုန်းအရာမှန်းသမျှကို ပုံအနေနဲ.ဖော်ပြပါတယ်။ပြီတော့အသုံးပြုသူကြည့်ခဲ့တဲ့Websiteလိပ်စာကအစမှတ်ထားပေးပါတယ်။ဘယ်လိုသုံးရလဲဆို တာကိုတော့အောက်မှဆက်လုပ်ကြည့်ပါအုံး။အရင်ဦးဆုံး ဒီနေရာကနေ Download ဆွဲလိုက်ပါဦး။Downlaod ချပြီးရင်တော့ Win Zip ဖြည်ရပါလိမ့်မည်။ ဖြည်လို.ရလာတဲ့ Folder မှ Goldeneye Setup File ကိုကလစ်နှိပ်ပြီ Install လုပ်ပေးပါ။လွယ်ပါတယ်။ Next ၊Install ၊Finish ဆက်တိုက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့Registerလုပ်ရပါမည်မလုပ်ပါက၁၅ရက်ပဲသုံးလို့ရပါတယ်။Registerလုပ်နည်းကလွယ်ကူ ပါတယ်Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ auto ပေါ်လာချိန်တွင်Register ဆိုတဲ့ပေါ်မှာနှိပ်ပါ။ပြီးရင် Download တုန်းကပါလာတဲ့ Folder ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။အဲဒီထဲက Golden Eye 4.5 Crack File ဆိုတာကိုဖွင့်ပြီးအဲဒီထဲက keygen.exe ကိုဖွင့်ပါ ။ပြီးရင် Register ဆိုတဲ့နေရာမှာ keygen ထဲက name ရယ် codeရယ်ကို copy လုပ်ပြီး Register ထဲမှာထည့်ပါပြီးရင်တော့ ok နှိပ်ပါ။Register လုပ်တာအောင်မြင်ကပါ Box အပေါ် ၁၅ရက်သာအသုံးပြုရန်စာသားပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။Program ကိုဖျောက်ရန်အတွက် မျက်လုံးပုံအောက်ရှိ Invisible mode ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ဒါမှသာလျှင်သုံးမယ်သူ User က Program မမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Program ကိုစတင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Start Mornitoring ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။လက်ရှိမြင်နေရသော Box ကိုဖျောက်ရန်အတွက် Hide ကိုကလစ်နှိပ်ပါ၊Ok နှိပ်ပါ။Gtalk ဖွင့်ပါ။username နှင့် password ရိုက်ပါ။5 မိနစ်လောက် Chatting ၀င်လိုက်ပါ။ကြာလေကောင်းလေပဲ။နောက်ပြီး IE ကိုဖွင့်ပြီး Website ကြည့်ပေးပါ။ကြာလေကောင်းလေပဲ။စုစုပေါင်း ၁၅ မိနစ်လောက်သုံးပေးပါ။သုံးပြီသွားရင်တော့ Golden Eye ကိုဖော်လို.ရပါပြီ။Golden Eye ကိုပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင် Shortcut က Ctrl +Alt+Shift+P ကိုစုံနှိပ်ပေးပါ။အောက်မှပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ထိပ်က Report Tab ကိုနှိပ်ပါ။Report Tab မှအရေးကြီးသောအရာများမှာ-keyStokes =မိမိ Keyboard မှရိုက်ထည့်သောစာများကိုဖော်ပြသည်။အထူးသဖြင့်မိမိ Gtalk ၀င်တုန်းမိမိ Gtalk ရဲ. Username နှင့် Password ကိုမှတ်ထားပေးသည်။Website =မိမိကြည့်ခဲ့သော Website လိပ်စာများကိုသိမ်းဆည်းပေးသည်။screenshots=မိမိသုံးခဲ့သော Desktop မျက်နှာပြင်ကို ၂မိနစ်တခါဓါတ်ပုံအဖြစ်သိမ်းပေးသည်။Monitoring Tab မှာကိုကြိုက်တဲ့ Setting ပြောင်းလို့ရပါတယ်။Options Tab ကတော့ ဒီ program ပြန်ဖော်နိူိင်ရန်အတွက် Shortcut ပြောင်းပေးလို.ရပါသေးတယ်။Password လဲလုံခြုံအောင်ပေးလို.ရပါတယ်။About ကတော့ ဒီ Program ကိုဖြုတ်လို.ရအောင် Uninstall ရှိပါလိမ့်မယ်။
စိုင်းနက္ခ ရဲ.နည်းပညာမှတ်တမ်း မှတဆင့်ဖော်ပြသည်။
သွေးကင်ဆာ ကုသ ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးတမျိုး ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
၆ မတ် ၂၀၀၉။ လူထုအသံ
သွေးကင်ဆာကို ကုသ ပျောက်ကင်းစေမည်ဟု ယုံကြည်ရသော ပထမဆုံး ဆေးဝါးတမျိုးကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဟု ဗြိတိန် ဆေးသိပ္ပံ ပညာရှင်များက မတ်လ (၄) ရက်နေ့က ကြေငြာ လိုက်သည်။
Vidaza ဟုအမည် ပေးထားသော အဆိုပါ ဆေးသည် သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့စေသည့် အခြေခံ အကြောင်း အရင်းများကို တိုက်ဖျက်ပေးမည်ဟု ယူဆရကြောင်း သိရသည်။ ထိုဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော သွေးဆဲလ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်လည်း လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ သွေးကင်ဆာ သုတေသနဌာန သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ရှာဘင် ဆရက်က ယခုဆေးဝါးသည် သွေးကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာရှင်များ အတွက် မျှော်လင့်ချက် အသစ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဆေးခန်းများတွင် နောက်ဆုံးအချိန်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဟု သတ်မှတ် ခံထားရသည့် သွေးကင်ဆာ ဝေဒနာသည်များ နှင့် ဆေးရုံတွင် ကာလ ကြာမြင့်စွာ တက်ရောက် ကုသခံနေရသည့် လူနာများအား ဆန္ဒကောက်ခံပြီး ထိုဆေးဝါးကို စမ်းသပ် သုံးစွဲသွားမည်ဟု သိရသည်။
ထိုဆေး၏ အာနိသင်ကို အသေအချာ မသိရသေးဘဲ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း မပြုသေးပါဟုလည်း ဒေါက်တာ ရှာဘင်က ဆိုသည်။ ကုသ ခံယူလိုသူများ ယခု ဆေးဝါး အသုံးပြုလိုခြင်း ရှိမရှိကို ကာယကံရှင် လူနာ၏ ဆန္ဒအတိုင်း မေးမြန်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ယခု ဆေးသည် သွေးကင်ဆာ လူနာများ အတွက် ကောင်းမွန်သော တုန့်ပြန်မှုများ ရရှိလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပညာရှင်များက ပြောကြား သွားသည်။
မြန်မာအပါအ၀င် ၄၂ နိုင်ငံကို ထိုင်းနိုင်ငံက သုံးလကြာ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြု
၆ မတ် ၂၀၀၉။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သော ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား သုံးလကြာဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများပါ ပါဝင်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (TAT) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှလေယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းကုမ္ပဏီမှ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ လေဆိပ်နှစ်ခုအား အစိုးရဆန့်ကျင်သူများမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် ပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ကျဆင်းသွားသော ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအား အမြန်ဆုံးပြန် လည်ဦးမော့လာစေရန် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်မှ ဇွန်လ ၄ ရက်အထိ နိုင်ငံပေါင်း ၄၂ နိုင်ငံ ဗီဇာကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွားအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသောသတင်းအရသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရာတွင် ဗီဇာကြေးအဖြစ် ကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ပေးချေရပြီး ထိုကဲ့သို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည့်သူများ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ကြောင်း လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များက ယူဆကြသည်။
ဒေါ်စုကို ဂလပ်စဂိုမြို့ က အမြင့်ဆုံးဆုပေးအပ်
၅ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ စကော့တလန်နယ်မှာ အကြီးမားဆုံးမြို့ ဖြစ်တဲ့ ဂလပ်စဂိုမြို့ ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးဆုရှင်အဖြစ် အဖမ်းအဆီး ခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အဲဒီဆုပေးအပ်တဲ့အခန်းအနားကို မနေ့က ဂလပ်စဂိုမြို့ တော်ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခန်းအနားမှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်စား NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့  ကုလသမဂ္ဂရေးရာတာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက တက် ရောက်ပြီးဆုကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆုချီးမြင့်ပွဲအခန်းအနားက ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရအောင် ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကို ကိုကျော်အောင်လွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဂလပ်စဂိုမြို့တော်ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး ဆုအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စား ဒေါက်တာ သောင်းထွန်းက သွားယူပေးတယ်ဆိုတော့ ဆုပေးပွဲ အခန်းအနားမှာ ဘယ်လို ထူးခြားမှုတွေ ရှိသလဲ ပြောပြပါဦး။အဲဒီ အခန်းအနားကို မြို့တော်ဝန် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပြီးတော့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂလပ်စဂို မြို့တော်ဝန်က ပြောသွားတာကတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဒီလို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုတွေကို နယ်ဆင် မန်ဒဲလား လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို ချီးမြှင့်တာ ရှိဖူးတယ်။ နယ်ဆင် မန်ဒဲလားက အသားရောင်ခွဲခြားမှု တိုက်ပွဲမှာ ဥှီးဆောင်ခဲ့ပြီး ထောင်ထဲမှာ ရှိနေစဉ်မှာ ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းပြီးတော့ ထောက်ခံအားပေးကြလို့ အခုလို လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး သမ္မတ ဘ၀နဲ့ ဂလပ်စဂိုမြို့ကို ပြန်ပြီး လာရောက် ပြီး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်ပြီး ဂလပ်စဂိုမြို့မှာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ အခန်းအနားမှာ မြို့တော် ကောင်တီအဖွဲ့ဝင် လူကြီးတွေ၊ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်တဲ့ အမ်နက်စတီ အင်တာနေရှယ်နယ်က မိတ်ဆွေတွေ၊ ဂလပ်စဂို အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဂလပ်စဂိုမြို့က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တက်ရောက်ပါတယ်။ဒီဆုက ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ တော်တော်ကို အရှိန်အ၀ါကြီးတဲ့ ဆုလားခင်ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဆုရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ ချီရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Edinburgh ကနေ Freedom of the city of Edinburgh မှာ လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း စကော့တလန် မှာ လုပ်တာက ဒုတိယ အကြိမ်ပေါ့နော်။ ပထမ အကြိမ်ကတော့ စကော့တစ် ပါလီမန်ရှိတဲ့ အီဒင်ဘာရာ ကချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတကာကနေ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်၊ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပေးတဲ့ ဆုပေါင်းက ၁၀၀ ကျော်နေပါပြီ။ အခုလို ဆုတွေ တခုပြီးတခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရနေတာဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်တာတွေ တိုးလာတာဟာ မြန်မာ့ပြည်တွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြုပြီး မြန်မာ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ပိုပြီး သိလာကြတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ခံမှုတွေ ပိုပြီး ရလာတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် လှုပ်ရှားတဲ့ လူထု အဖွဲ့အစည်းတွေ ပိုတိုးပွားလာပါတယ်။ အဲဒီ လူထု အဖွဲ့အစည်းတွေက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများကို ဗမာပြည်အရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေမှာ ကုလသမဂ္ဂမှာ ပိုပြီး တွန်းအားပေးဖို့ ပိုများလာပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးဟာ မြန်မာပြည်တွင်းရေး ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်ရေးအတွက်တင် မကဘဲ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုလို နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆက်လာတာဟာ အင်မတန် အားရပါတယ်။
အာကာသအတွင်း အရှိန်ပြင်းထန်သောကျောက်တုံး ကမ္ဘာကိုဦးတည်
၄ မတ် ၂၀၀၉။
အာကသအတွင်းမှာ ရောမ ကျောက်တုံးကြီးတခုဟာ ကမ္ဘာမြေကို ဦးတည် ပြီးအရှိန်နဲ့လာနေပါတယ်။ဒီကျောက်တုံးကြီးက ဆယ်ထပ်တိုက်ခန့် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူကို ၂၀၀၉ -DD45 လို့ အာကသပညာရှင်တွေက နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေနဲ့မိုင်းပေါင်း ၄၄၇၅၀ မိုင်အကွာကိုရောက်နေပါတယ်။့ ဆိုပါတယ်။ဒီကျောက်တုံးသာကမ္ဘာမြေကိုထိမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နယူကလီးယားဗုံးပေါင်းတထောင်လောက်ဖေါက်ခွဲလိုက်တာနဲ့ ညီနိင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကျောက်တုံးကြီးလာနေတာကိုပထမဆုံးသတင်းပေးပို့တဲ့အာကာသလေ့လာရေးစခန်းကတော့သြစတေးလျားနိင်ငံ က စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစခန်းကအကာသအတွင်းမှာ ကမ္ဘာမြေကို ထိမှန်နိင်တဲ့ဥက္ကာပျံတွေကို ပဲစောင့်ကြည့် နေတဲ့လေ့လာရေးစခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကျောက်တုံးဟာ ၁၉၀၈ ခုနစ် ရုရှားနိင်ငံ ဆိုက်ဘေးရီယားကို ထိမှန်ခဲ့တဲ့အကာသအတွင်းမှာ ဥကာပျံ (ခ)ကျောက်တုံး အရွယ်ခန့် ရှိတယ်လိုဆိုပါတယ်။ဆိုက်ဘေးရီးယားကိုထိမှန်ခဲ့စဉ်က မိုင်း ၈၀၀ပတ်ပတ်လည်ကိုငရဲမီးလျှံသင့်စေခဲ့ သလို သစ်ပင်ပေါင်း ၈ သန်းနီးပါးကို မီးကျွမ်းသွားစေခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။ဒီကျောက်တုံးဟာကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ကိုဦးတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက်မင်္ဂလာသတင်းဖြစ်လာနိင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
true myanmar မှတင်ဆက်သည်။
ရန်ကုန်မှာ အင်္ဂါနေ့ည ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲ
၄ မတ် ၂၀၀၉။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
မတ်လ ၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ည ၉ နာရီခွဲလောက်က ရန်ကုန် စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာ ပထမဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီလောက်မှာတော့ ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာ ဒုတိယဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးကွဲမှုတွေကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မတွေ့ရဘူးလို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဗုံးကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာက အနီးအနားတ၀ိုက်ကိုလုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ဗုံးကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုံးကွဲခဲ့တဲ့နေရာကို ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့သူနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး မသင်းသီရိကတင်ပြပေးထားပါတယ်။
မနေ့ အင်္ဂါနေ့ည ၉ နာရီကျော်လောက် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကားမှတ်တိုင်အနောက်ဘက်က ကလေးအားကစားကွင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ ပဒုမ္မာပန်းခြံကွင်းလေးအတွင်းမှာပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာ အသံကျယ်လောင်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်က သတိထားမိကြပြီး အဲဒီပန်းခြံနားကို လူအများအပြား သွားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုအတွင်းမှာ အပျက်အစီး၊ အဆုံးအရှုံးတွေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ၊ အသေအပျောက်တွေရှိတာ မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောပါတယ်။
“၉ နာရီ ၂၀ လောက်မှာပါ။ မြေနီကုန်း၊ ပဒုမ္မာပန်းခြံနားမှာ ပေါက်သွားတာပါ။ပေါက်ပြီးတော့ လူတွေဘာတွေတော့ ၀င်ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီနားကို။ ချက်ချင်းပဲလူတွေကလည်း ကြည့်နေတာ ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ လူတွေကတော့ အသံ နည်းနည်းကျယ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့က ပေါက်ပြီးတော့မှ သွားတာကိုး။ စစ်တပ်လည်းလာတယ်၊ ရဲလည်းလာတယ်၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ရဲတွေ၊ မီးသတ်တွေလည်းလာတယ်။ရန်ကုန်ဘက်တက်တဲ့လမ်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး ခွေးတွေနဲ့ လိုက်ရှာတယ်။ လူတွေကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ပန်းခြံထဲမှာဖြစ်တာဆိုတော့။”
အခု စမ်းချောင်း ပဒုမ္မာပန်းခြံတွင်း ပေါက်ကွဲမှုကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက စစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီးမှာလည်း နောက်ထပ်ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုကိုလည်း အဲဒီမျက်မြင်သက်သေက သူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့ရလို့သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကို အခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။
“မြေနီကုန်းမှာပေါက်တာကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်နဲ့ပြေးထွက်ပြီး စစ်ကားတွေကို ပြေးတက်သွားကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူတွေကလည်းနောက်ထပ်တလုံးတွေ့လားဆိုပြီး ဟိုဘက်ကားလမ်းကို ပြေးကြတာပေါ့။ ပြေးတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က မြောက်ဘက်ကို တက်သွားတယ်။ တချို့ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိတဲ့လူတွေကတော့လိုက်ကြည့်တာပေါ့။ ကျနော်တို့လည်း တက္ကဆီနဲ့ လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကြတော့လှည်းတန်းမှာ နောက်တလုံးပေါက်တာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာလည်း အင်းစိန်လမ်းမကြီးဘက်က ကားလာတာတွေကို ပိတ်လိုက်တယ်။ တလုံးနဲ့တလုံးက မိနစ် ၄၀ လောက်ပဲကွာမယ်။ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်လောက်မှာ ပေါက်သွားတာ။”
စမ်းချောင်းနဲ့ လှည်းတန်းနားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုစလုံးဟာ မိနစ်အပိုင်းအခြားအတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီနှစ်နေရာစလုံးမှာ သေဆုံးမှုတွေ၊ ဒဏ်ရာရမှုတွေ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ပိုင်းအတွင်း အဲဒီနေရာတွေကို ရဲတွေကဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်၊ ကြည့်ရှုခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ပေါက်ပြီး ကျနော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ တပ်ကလည်း ရောက်နေပြီ၊ ရဲတွေလည်း ရောက်နေပြီ၊ မော်တော်ပီကယ်တွေလည်း ရောက်နေပြီ။ ပေါက်ပြီးတော့မှရောက်သွားတော့ သူတို့ အ၀ါရောင်ကြိုးတွေ တန်းလိုက်တယ်။ အခုနောက်ဆုံးကျနော်တို့သိသလောက်တော့ အင်းစိန်ဘက်သွားတဲ့ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ အခု ပြန်ဖွင့်လား၊ မဖွင့်လားတော့ မသိသေးဘူး။ ပြည်လမ်းဘက်တခြမ်း ဖွင့်ထားတယ်၊ လှည်းတန်းဈေးဘက် ဖွင့်ထားတယ်။ ရဲတွေက ဘာလာလုပ်တာလဲ၊ သွား၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်၊ နောက်တခါပြဿနာတက်လို့ ခေါ်မေးမခံချင်ရင်ပြန်ကြဆိုပြီး ရဲက အဲဒီလိုအော်တယ်။ လူတွေက အများကြီးရောက်လာပြီး ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်နဲ့ဆိုတော့။ လူတွေကတော့ တော်တော်များတယ်။ မီးကလည်း ပြတ်နေတယ်။လှည်းတန်းလည်းပြတ်နေတယ်၊ ပဒုမ္မာကွင်းလည်း ပြတ်နေတယ်။”
ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုစလုံးကို ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က မျက်မြင်သက်သေတဦးပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေက မနေ့ညပိုင်းက ဖြစ်ခဲ့တာမို့ အစိုးရဘက်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးတော့ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့လကလည်း ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာဗုံးပေါက်ကွဲမှု နှစ်ခုဖြစ်သလို အဲဒီပေါက်ကွဲမှုအတွင်းမှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊သေဆုံးတာ မရှိပါဘူး။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့လယ်မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံနားက ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းကတော့ လူ ၁၂ ဦးနီးပါး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ ဒီဖောက်ခွဲမှုတွေကိုပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ပယောဂမကင်းဘူးလို့ ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပအတိုက်အခံ အင်အားစုတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရစွပ်စွဲတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ ဒီဖောက်ခွဲမှုတွေဟာ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း ချေပပြောဆိုကြပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တော် နှစ်(၁၅၀)ပြည့်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
၃ မတ် ၂၀၀၉။ ပုလဲနက်
မန္တလေးမြို့တော် စတင်တည်ထောင်သည့် နှစ်(၁၅၀)ပြည့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ မြို့တော်တည်ထောင်သည့် အထိမ်းအမှတ် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ယခုနှစ် မေလလယ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုသည်။ မေလ(၁၅)ရက်နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်မည့် (၅)ရက်ကြာ ပွဲတော်အား မန္တလေး တောင်ခြေရှိ အားကစားကွင်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေးပွဲတော်များ၊ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များလည်း ထည့်သွင်းထားကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီကဆိုသည်။ ပွဲတော်အတွင်း ရိုးရာ လက်ဝှေ့ပွဲများလည်း ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ပြီး Mandalay FMအသံလွှင့်ဌာနက ပွဲတော်အစီအစဉ်များအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်အကြို လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မန္တလေးဇာတ်ရုံတွင် ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့မှ (၅)ရက်နေ့အထိ ဒေသခံအဆိုရှင်များနှင့် နာမည်ရ အဆိုတော်များက စတိတ်ရှိုးဖြင့် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေဦးမည်ဟု သိရသည်။မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မြို့တော်အဖြစ် တင်စားခြင်း ခံရသော မန္တလေးမြို့သည် နောက်ဆုံးမြန်မာမင်းဆက် ထီးနန်းစိုးစံသွားသော မြို့တော်ဟောင်းလည်းဖြစ်ပြီး ရတနာပုံ နေပြည်တော်ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနံဘေးရှိ မြို့တော်သည် သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)တိုင်တိုင် ကြာမြင့်သည့် ယခုခေတ်ကာလတွင် လူဦးရေ (၁)သန်းကျော်မျှ မှီတင်းနေထိုင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုး စုန်းစုန်းချုပ်နေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်များစွာ
၃ မတ် ၂၀၀၉။ လူထုအသံ
ဟိုး…. မြို့သစ် ချောင်ကြားက အိမ်စုတ်လေးထဲက ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ စာကျက်နေတဲ့ ကလေးငယ်၊ ဘေးနားက ချဲတွက်နေတဲ့ သူ့အမေ၊ သူ့အဖေက မျက်ထောင့်နီနီ တိုင်နံရံမှာ မှီလို့ အမူးမပြေ့တပြေနဲ့ သူ့သားလေးကို ခြင်ဟပ်လို့ ယပ်ခတ်ပေးရင်း သူ့သား စာကျက်သံကို ဇရက်မင်း စည်းစိမ်ယူရင်း စောင်းငမ်းငမ်းနဲ့ နားစွင့်နေတယ်။
ခွေးတွေကလဲ ဟောင်လိုက်တာ။ မနေ့တုန်းက သူတို့ အိမ်မျက်စောင်းထိုး အပေါင်ဆိုင်ကို သူခိုး ၀င်ခိုးတုန်း ကတော့ ဒီသောက်ခွေးက မဟောင် ဒီနေ့မှ ဘာကြောင့် ဟောင်နေပါလိမ့် အော်အော် သူ့အမ အလုပ်က ပြန်လာပြီပဲ။ ညဉ့်တောင် နက်ရော့မယ်။ အခုမှ သူ့ စင်တင်တေးဂီတ ဆိုင်က ပြီးတယ်ဆိုလား? မောင်လေးရေ ရော့ ရော့ မုန့်ဖိုး .. စာသေချာ ကျက်နော် ... မမ အိပ်ချင်ပြီကွယ် အမေရေ အဖေ့ကို တွဲတင်ရအောင် တိုင်ထောင့်မှာ ခွေခွေလဲနေတာ အအေး ပတ်တော့မယ် .. ၀ုတ် ၀ုတ် အူ....အူ......ဝု.....ဝူး.....
သူတို့တွေဟာ ဒီနေ့ကို ဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။ မနက်ဖြန်ရော ဘယ်လို ဖြတ်ရအုန်း မှာပါလိမ့်၊ သူတို့အတွက် ဒီမြေ ဒီရေ ဒီရေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တမ်းတခြင်းတွေ အိမ်မက်လှလှတွေ ပေါ်စေရဲ့လား။ သူတို့အတွက် ဒီနေ့ဟာ မနက်ဖြန်အတွက် ရောင်ခြည်ဦးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား? သူတို့အတွက် နောက်နေ့ဆိုတာ ရေရာ သေချာစွာနဲ့ ကောင်းခြင်းတွေ ဝေဖြာနေပါရဲ့လား? ဟင့်အင်း! လို့ အမှန်အတိုင်း ငါဖြေရင် သံတိုင်တွေ ငေါက်ကနဲ့ ခေါ်သံတွေ ကြားရမယ်။ အင်းလို့ ငါဖြေရင် ငါ့သမိုင်းတွေ အဆိပ်သင့်တော့မယ်။ အော် ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိတဲ့ မနက်ဖြန်များ အကြောင်းကို နေ့စဉ် မွန်းကြပ်မှုတွေ ခါးသီးမှုတွေကို မြိုမြိုချနေရလို့ တနေ့တော့ ဖြစ်လာမှာပါ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဘဝတွေ ခေါက်ရိုးများကို ကျိုးလို့။
မနေ့ ကလေ … မနေ့ကပေါ့ ........ မနေ့က ဆိုတာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နော် ။ တော်ကြာ သတင်းစာထဲက မီးတွေလာ တိုင်းပြည်ကသာ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ငါတွေ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလို အပ်ချမတ်ချ မဟုတ်ပဲ တလွဲစီဖြစ်နေတော့ မယုံမရဲ ဖြစ်မစိုးလို့ အဲ့ …. မနေ့ညကလေ ငါတို့မိသားစု အိပ်ရာဝင်မလို့ မီးခလုတ်တွေကို ဓါတ်မီးမှိန်မှိန်နဲ့ လိုက်ပိတ်နေတုန်း အိမ်ရှေ့က လူသံတွေ အုပ်အုပ်အက်အက်နဲ့ စကြားလာခဲ့တယ်။ မီးပျက်နေတာက နေ့ခင်း ကတည်းကပါ။ မီးပြန်လာချိန်သိရအောင် ဆိုပြီး အိမ်မီးလိုင်းကို ဖွင့်ထားတော့ ညပိုင်း အိပ်ချိန်မှာ မီးအကယ်လို့ လာနေရင် လင်းနေ မှာစိုးလို့ ဓါတ်မီးအလင်းလေးနဲ့ လိုက်ပိတ်နေတုန်း ကြားခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအသံတွေဟာ သုသာန် တစပြင်လို တိတ်ဆိတ်နေပြီး တခါတခါ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ ကားသံကြားမှ အသက်ဝင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ထူးဆန်းနေတာပေါ့။
“ မအေ--ိုး။ ခွေးသူခိုး။ သေဖို့သာပြင်” ခွပ် ဖေါင်းဖေါင်း... ချ .. ချ အသေသတ်ပစ်.. မအေ--ိုး ကိုယ်မေကို--ိုး” ကျမ်းကိုးကားပြီး ဆဲသလို စုံစေ့လှတဲ့ ဆဲသံတွေနဲ့ အတူ “အမလေး သေပါပြီဗျ.. ကျနော် မလုပ်ပါဘူး။ အား .. အား.. ခွပ်.”
မနေနိုင်တဲ့ ငါလဲ အိမ်တံခါးသော့ဖွင့်ပြီး ခြံဝင်းထဲပြေးထွက်ပြီး ခြံစည်းရိုးကနေ ကြည့်လိုက်တော့ တဘက်က အိမ်ရှေ့မှာ အင်ဗာတာ နဲ့ ထွန်းထားတဲ့ ဓါတ်တိုင် မီးချောင်းအောက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ထင်းထင်း လှမ်းမြင်ရတော့ တာပဲ................။
အကျီမပါတဲ့ လူနှစ်ယောက်( လူငယ်သာသာပါပဲ ရှိလှပေါ့ ၂၀ ) နဲ့ အင်္ကျီဖြူ ညစ်နွမ်းနွမ်း ပုဆိုးခပ်တိုတို ၀တ်ထားတဲ့ လူတယောက် ပေါင်းသုံးယောက် က အခြား လူငယ်တယောက်ကို ၀ိုင်းပြီး ကန်ကျောက်ရိုက်ထိုးနဲ့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတယ်။ ခံနေရတဲ့ လူငယ်က လက်မောင်းပလွေရိုး... ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်.... ခါးပတ်က သံဖြူပြားတွေနဲ့ အလှစီထားတဲ့ ခေတ်ပေါ်လူငယ်တွေ စတိုင်လ်နဲ့ အပေါ်က အကျီင်္လက်ပြတ် စုတ်စုတ်တထည်ကို ၀တ်ထားပြီး သူ့ခါးမှာ လျော့ရဲရဲနဲ့ အပေါ်အကျီဖြူကို ချည်သိုင်းထားတယ် လက်မောင်းမှာလည်း တက်တူးခေါ်တဲ့ အရုပ်တချို့ ထိုးထားတယ် ထင်တာပဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ သုံးယောက် တယောက် ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်နေတာကို အဲဒီတဖက်အိမ်က လူတွေက ထွက်တောင်မကြည့်ဘူး။ အိမ်ထဲကပဲ ချောင်းနေထင်ရဲ့။
ဆဲဆဲဆိုဆို ထိုးထိုးကန်ကန်နဲ့ အကျီဖြူဝတ်ထားတဲ့ ကောင်က ဦးဆောင်ပြီး အဲဒီ ဟစ်ဟော့ ကောင်လေး တယောက်ကို ချနေတာ။ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်ကန်လိုက် ခံရတဲ့ ကောင်က အား! အမေ့ အမလေး… သေပါပြီဗျ!... မလုပ်ပါနဲ့ဗျ!... ကူကြပါအုံးဗျ ...! အော်လိုက် ။ ဟိုတဘက်က ကောင်က အုတ်ခဲ နဲ့ ပုခုံး လို့ထင်တာပဲ ဦးခေါင်းကို ထုတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ထုလိုက် ခြေထောက်နဲ့ ဆောင့်ကန်လိုက်။ ယိုင်လဲခွေပြော့ နောက်လန်သွားတာကို ပြေးကန်လိုက်နဲ့ ငါ့မျက်စိထဲမြင်နေတာ။ စိတ်ထဲမတော့ တီဗွီက ပြပြတတ်တဲ့ Discovery ထဲက တိရိစ္တာန်တွေ ခြင်္သေ့တွေက သမင်တွေ သားကောင်တွေကို ၀ိုင်းပြီး အမဲဖျက်တာ သတ်ကြ ရက်စက်ကြတာ မြင်ယောင်နေမိတယ်။
စာဖတ်သူက ပြောမယ် မင်းဘာလို့ ထွက်မဆွဲသလဲလို့ အဲလို လူတယောက်ကို လူအများက မတရား အနိုင်ကျင့်နေတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေသလားလို့။ ဟုတ်တယ် ငါလည်း ထွက်ဆွဲမလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိမ်က မိဘတွေက ငါ့ကိုဆွဲ မထွက်နဲ့မထွက်နဲ့လို့ ခပ်အုပ်အုပ်ပြောတယ်၊ မတော်လို့ အခု အရိုက်ခံနေရတဲ့ ဆေးဘဲလိုလို ပိန်ပိန်ကောင်က မနေ့ကမှ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံဖို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့ ထောင်က လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ သူခိုးဂျပိုးဖြစ်နေရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ! တဲ့ ဒီကောင် တခုခု ၀င်ခိုးလို့ သူ့ကို ၀ိုင်းဆုံးမ နေတာလားမှ မသိတာတဲ့… ဟုတ်မှာ …ဟုတ်မှာ .. စိတ်ထဲမတော့ အသိချပ်နေလေရဲ့။
ဟုတ်ပါ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မှောင်နေတာပဲ ။ အဲဒီအိမ် သူတို့ ရန်ဖြစ် ရိုက်နှက်နေတဲ့ အိမ်ရှေ့တခုပဲ ဓါတ်မီးတိုင်တခု ထွန်းပေးထားလို့ လင်းနေတော့ ပွဲကြည့်စင်ကနေ ကြိုးဝိုင်း လင်းလင်းထဲက လက်ဝှေ့ပွဲကို ကြည့်သလို မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းဆိုးဆိုးဟာ ၅ မိနစ်လောက် လုပ်ချင်သလို လုပ်ပြီး ခွေခွေလေးနဲ့ ငါ့တဘက်အိမ် ခြံတံခါး သံပန်းကို မှီလဲနေတဲ့ ဘိန်းစားလိုလို ဆေးခြောက်သမားလိုလို ကောင်ကို ဟိုသုံးယောက် အနက်က အကျီဖြူနဲ့ ကောင်က အုတ်ခဲနဲ့ အားရပါးရ ပစ်ပေါက်ပြီး မိုးမွန်တဲ့ အဆဲသံတွေပြော ထွက်သွားတော့တယ်။ ငါလဲ အိမ်ထဲကကို မထွက်ဖြစ်သေးဘူး၊ စိတ်ထဲ မတော့ တယောက်နဲ့ အများမို့ သနားလို့ မဆုံးသေးဖူး။
စောစောကတော့ သနားစဖွယ် အသံနဲ့ အသံကုန်အောင်နေတဲ့ ကောင်.... သေပါပြီဗျ! ကျနော် မခိုးပါဘူးဗျ! ကယ်ကြပါအုံးဗျ .. ! အောင်မလေး! အား … အား စတဲ့ စကားလုံးပေါင်းများစွာနဲ့ အသံနက်ကြီးတွေနဲ့ အော်ဟစ်နေတဲ့ အထိုးရိုက်ခံလူငယ်ဟာ ..... ဓါတ်မီးတိုင်အောက် ခြံစည်းရိုးဘေးကနေ သူမဟုတ်သလိုပဲ ကုန်းထပြီး ဟိုကြည့် သည်ကြည့်နဲ့ ထွက်သွားပါလေရော အလင်းရောင် သိပ်မရလို့ သူ့မှာ သွေးတွေ ထွက်နေမနေ မသေချာပါဘူး။ ကောင်းကောင်း မမြင်လိုက်ပါဘူး လက်မောင်းပုလွေရိုးနဲ့ ခပ်ပိန်ပိန် ဆေးခြောက်သမားလို အဲဒီကောင်ဟာ လက်စသတ်တော့ ကျနော်တို့ အိမ် သုံးလေးအိမ်ကျော်လောက် အသုဘအိမ် ဖဲဝိုင်းက ထ လာတာကိုး … သူဟာ မူးလဲ မူးနေပုံရတယ်။ သူ့ပုံကြည့်ရတာ မူးယစ်ဆေးဝါးလဲ သုံးခဲ့ပုံရတယ်။ ယိုင်တိယိုင်ထိုးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေပုံက ဒါဏ်ရာတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ သူ့ကို သူ့အဖေါ်တချို့က တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ထွက်လာမေးပုံကို အသုဘအိမ်ရှေ့ မီးရောင်မှိန်မှိန်နဲ့ လှမ်းမြင်ရပြန်ပါရော။
အဲ... မကြာပါဘူး။ စောစောက ကောင် ငမူး၊ ငကြောင် ထွက်သွားရာ ဘက်ကနေ အော်သံတွေ ကြားရပြန်ပါရော.. ဟေ့ကောင်တွေ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ငါ့ကို မလုပ်နဲ့ ဟေ့ကောင်တွေ ဟေ့ကောင်တွေ ဆိုပြီး ပြေးလွှားလာတဲ့ အသံတွေ ကြားရပြန်ရော။ ငါလည်း ခြံတိုင်တွင်းထဲက အမှောင်ထုကို အကာကွယ်ယူပြီး ဆက်စောင့်ကြည့်နေမိတယ်။ တဘက်အိမ်မီးတိုင် အလင်းနဲ့တင် မြင်နေရပါပြီ။ စောစောက မူးကြောင်ကြောင်ကောင်ကို တဖက်သတ် ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးလို့ ထင်ရတဲ့ အကျီဖြူ ပုဆိုးနဲ့ကောင်က ရှေ့ကထွက်ပြေးလာတယ် သူ ၀ဋ်လည်ပြီထင်တယ်။ စောစောကတော့ သူက တခြား လူတယောက်ကို သေလုမျောပါးဖြစ်အောင် ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူခံရတဲ့ အလှည့်ပေါ့ ။
လူ့လောကကြီးက သံဝေဂ ရစရာပဲ။ မုဆိုးဖြစ်လိုက် သားကောင်ဖြစ်လိုက်နဲ့လေ...... ၀ရုန်းသုန်းကား ပြေးနေတဲ့ သူ့နောက်က အကျီမပါ ပုဆိုးကို ပေါင်ပေါ်လောက်ထိ တိုအောင်ဝတ်ထားတဲ့ လူသုံးယောက်က အမဲဖျက်မလို အားကုန် ပြေးလိုက်လာတယ် သူတို့လက်ထဲမှာလဲ ပျဉ်ချောင်းကြီးတွေ ဒုတ်တွေနဲ့ .. တရကြမ်းပြေးလိုက်ရင်း ရှေ့ကကောင်ကို မှီတာနဲ့ မှီတဲ့ နေရာ ကျောကုန်းတို့ ဦးခေါင်းတို့ကို အားကုန်လွဲပြီး လှမ်းရိုက်နေတယ် တခွပ်ခွပ် တဖေါင်းဖေါင်းပဲ ရှေ့ကကောင်ကလည်း ပြေးရင်းအော် အော်ရင်းပြေး ငါမြင်လိုက်ရတာက မီးတိုင် အလင်းမှိန်ပျပျအောက်က အသက်လုထွက်ပြေးတဲ့ ရှေကကောင်နဲ့ ဘီလူးသဘက်စီး သလို သတ်မယ်ဖြတ်မယ့် ပုံနဲ့ ပြေးလိုက်ရိုက်နှက်နေတဲ့ သူတို့ သုံးယောက်ကို ဖြတ်ကနဲပဲ မြင်လိုက်တာ ။
အသံတွေကတော့ ဆက်ကြားနေတုန်းပဲ အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်ပြေးသူက ပြေး ညာသံပေးပြီး လိုက်ရိုက်သူက ရိုက်..... အူး ဟူးဟူး ….. ငါက သူတို့ဆီက အသံ အကြားနဲ့တင် မောနေပြီ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီလဲ။ ငါတို့တိုင်းပြည် ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ........... သူတို့ ဘယ်ထိ လိုက်ရိုက်နေလဲမသိ ငါလည်း မမြင်နိုင်တော့ပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်တချို့ ကနေ ဓါတ်မီးရောင် အလင်းတချို့ အမှောင်ထု လမ်းမပေါ်ကို ဝေ့၀ဲထွက်လာတယ် စူးစမ်းတဲ့သဘော ငါတို့အိမ်က မအိပ်သေးဘူး ပြဿနာ လာရှာမယ် စိတ်မကူးနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ အရိပ်အယောင် ပြတဲ့ သဘောထင်ပါရဲ့ အိမ်ပြင်တော့ ဘယ်သူမှ ထွက်မကြည့်ကြဘူး ငါလည်း ထွက်မလိုက်ရဲဘူး သူတို့က ဘီလူးစီး သရဲစီး ဖြစ်နေကြပုံတွေ ........ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေမှန်းလဲ ကိုယ်မသိ။ မနေ့ကတင် ထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ တေလေဂျပိုး လက်ယဉ်နေတဲ့ လူသတ်သမားတွေ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.... ငါ့အမေပြောသလို အချင်းချင်း ကျောင်းတော်က ရန်စ ကို အပြင်ရောက်မှ ဖေါက်ရှင်း ရှင်းနေတာဆိုရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ? ပဲလှော်ကြား ငါ ဆားညှပ် သွားမှာပေါ့။
အင်း ..... ပြီးတော့
သတင်းစာထဲ မီးလာသလောက် အပြင်မှာက တစပြင်လို မဲမှောင် ငြိမ်သက် နေလေရဲ့ ... ရန်ကုန်မြို့သစ် အိပ်ပြီ ထင်တယ်။
အော် ငါ့နာရီကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ည ဆယ်နာရီနဲ့ ဆယ့်ငါးမိနစ်ပဲ ရှိပါသေးလား။ သိပ်ညဉ့်အနက်ကြီး မဟုတ်သေးဘဲကိုး ။ ငါတို့ နိုင်ငံ ငါတို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ဘာတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်? သူတို့ ပြောနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်း သာယာနေပါတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့လား? တကယ်လား? နွေနေ တံလျှပ်တွေလား? ဒီနေ့တွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ မနက်ဖြန်များထဲမှာ မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရုပ်ဆိုး ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာ ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး နွားရိုင်းသွင်းချိန်ရဲ့ တကယ့် နိစ္စဓူဝ ဇာတ်ရုပ်တွေပဲလား?
မနက်ဖြန် ဘာများဖြစ်လာ မှာပါလိမ့်..
ကြေကွဲခြင်း မွဲတဲ့ မိုးတိမ်အောက်မှာ
ဆွံ့အ ရင်း ဆွံ့အ နေရတာဟာ …..
အကြောက်တရားတွေနဲ့ ဖိစီးထားတဲ့ စစ်ဖိနပ်တွေအောက်မှာ မိုးစုံးစုံး ချုပ်နေလို့ပဲ မဟုတ်ပါလား ။
ရွှေဘန်း( ရန်ကုန်သစ် ) …
နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အရေးပေါ်အကူအညီ ကုလသမဂ္ဂ တောင...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကုလကြေညာချက် အမေရိက...
မြန်မာ့အသံနှင့် မြ၀တီ ရုပ်သံတို့မှတင်ဆက်ပြသမည့် မေ...
ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ ပြန်လည် လက်ခံမည်...
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူမရှိဘူးလို့ မြန်မာသံအ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းနှင့်ချီ၍ ဖမ်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည့် ရှားပါး ငါး မျိုးစိ...
သွေးကင်ဆာ ကုသ ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးတမျိုး ဖော်ထုတ်န...
မြန်မာအပါအ၀င် ၄၂ နိုင်ငံကို ထိုင်းနိုင်ငံက သုံးလကြ...
အာကာသအတွင်း အရှိန်ပြင်းထန်သောကျောက်တုံး ကမ္ဘာကိုဦး...
Philadelphia's top cop apologizes to them